စပိန်အသင်း လူစာရင်းမှ ဒီယေဂိုကော်စတာ နုတ်ထွက် - Yangon Media Group
စပိန်အသင်း လူစာရင်းမှ ဒီယေဂိုကော်စတာ နုတ်ထွက်
အက်သလက်တီကိုအသင်း တိုက်စစ်မှူးဖြစ်သူ ဒီယေဂိုကော် စတာသည် UEFA နေးရှင်းလိဂ်ပြိုင်ပွဲဝင်မည့် စပိန်လက်ရွေးစင် အသင်းတွင် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရသော်လည်း ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကြောင်းပြချက်နှင့်အတူ ပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် အဆင်သင့်မဖြစ်သေးကြောင်း ငြင်းဆန်ကာ အသင်းလူစာရင်းမှ နုတ်ထွက်ခဲ့ကြောင်း စပိန်ဘောလုံး အဖွဲ့ချုပ်၏ အတည်ပြု သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။
စပိန်လက်ရွေးစင်အသင်း နည်းပြသစ်ဖြစ်သူ အန်းနရစ်အနေ ဖြင့် အပြီးသတ်လူစာရင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ရာ၌ အတောင့်တင်းဆုံး လူစာရင်းအဖြစ် တိုက်စစ်တွင် မိုရာတာ၊ ဒီယေဂိုကော်စတာ၊ အဆန်စီယို၊ အစ္စကို၊ မိုရီနိုနှင့် ဆူဆိုတို့အား ရွေးချယ်ထားခဲ့သော်လည်း ယခုကဲ့သို့ ဒီယေဂိုကော်စတာ နုတ်ထွက်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ၎င်း၏နေရာတွင် ဆယ်လ်တာဗီကိုတိုက်စစ်မှူး အိုင်ဂိုအက်စ်ပတ်အား အစားထိုး ရွေးချယ်ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါအခြေအနေအတွက် ကာယကံရှင်ဖြစ်သူ ဒီယေဂိုကော် စတာအနေဖြင့် တစ်စုံတစ်ရာ မှတ်ချက်ပြု ပြောကြားခဲ့ခြင်း မရှိသော်လည်း ပြီးခဲ့သည့် ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲမတိုင်မီ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် စပိန် ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်၏ နည်းပြအပြောင်းအလဲပြုလုပ်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်နိုင်ကြောင်း စပိန်မီဒီယာအချို့မှ သုံးသပ်ဖော်ပြလျက်ရှိနေသည်။
စပိန်အသင်းအနေဖြင့် UEFA နေးရှင်းလိဂ်တွင် အင်္ဂလန်၊ ခရို အေးရှားတို့နှင့် တစ်အုပ်စုတည်း ကျရောက်လျက်ရှိပြီး စက်တင်ဘာ ၉ရက်တွင် အုပ်စုအဖွင့်ပွဲစဉ်အဖြစ် အင်္ဂလန်အသင်းနှင့်လည်းကောင်း၊ စက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်တွင် ခရိုအေးရှားအသင်းနှင့်လည်းကောင်း ယှဉ်ပြိုင်ကစားရမည်ဖြစ်သည်။
ဂုတ်တွင်းတံတား စီမံကိန်းမှာ နိုင်ငံတော်စီမံကိန်း ဖြစ်ခြင်းကြောင့် မြေယာလျော်ကြေး မယူသူမျ
မန်စီးတီးနှင့် ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်အပါအဝင် ချန်ပီယံလိဂ် အုပ်စုအဆင့် အိမ်ကွင်းပွဲစဉ်များ?
ဒဏ်ရာကြောင့် မော်ရိုကိုအသင်းနှင့် ပွဲကို မက်ဆီ လွဲချော်
အလွန် အန္တရာယ်များသော အခြေအနေသို့ ရောက်နေပြီဟု ပီတာချက်ဝန်ခံ၊ ဆန်းချက်ဇ်ကို ချန်လှပ်ခဲ့ရြ??
ပရိုမိုးရှင်းပေးသည့် package များအတွက် ၅၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချ ဆောင်ရွက်ခွင့် ဆက်သွယ်ရေး အေ